ထုတ်ဖော်: လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အညစ်ညမ်းဆုံးပြွန်လိုင်းများ - သတင်း
လတ်တလောသုတေသနကဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ဘဏ္Timesာရေး Times လန်ဒန်မြေအောက်စနစ်တွင်လေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့်အချို့ကိုအလင်းဖြာပေးခဲ့ပြီးရလဒ်မှာမလွယ်ကူပါ။
ခရီးသည် ၄.၈ သန်းကျော်နေ့စဉ်နှင့်အမျှသင်ပြွန်ကိုမြို့တစ်ဝှမ်းသို့ပို့ဆောင်ရန်အလွန်လုံခြုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ချင်ပါသည်။ သို့သော်ဤ FT လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသေစေနိုင်သည်။
သုတေသီများသည်ဇုန် ၁ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်း ၇၅ ခုတွင်ပြွန်ရထားများအတွင်းရှိလေထုအရည်အသွေးကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးရလဒ်မှာအလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
??? your သင်၏ spooktacular ဓာတ်ပုံများကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ @ jbramagram⁠⠀⁠⠀⁠ # ဟယ်လိုဝင်း # ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဟယ်လိုဝင်း # လန်ဒန်မြို့၊
မျှဝေသည် လန်ဒန်မြို့သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 4:20 pm တွင် PDT မှာနိုဝင်ဘာ 2, 2019 ရက်တွင် (@transportforlondon)
ဗဟိုလိုင်းသည်အများဆုံးညစ်ညမ်းသောမျဉ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အလယ်လိုင်းပူပြင်းခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းနှင့်နောက်ကျဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို memes မြင်ကြပေမယ့်ငါတို့ကိုသတ်ဖြတ်အကြောင်းကိုသူမြားအဘို့အဆင်သင့်ရှိသည်။
သုတေသနပြုချက်များအရ ၄ င်း၏ရထားများအတွင်းရှိလေထုသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှလုံခြုံသောအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းလေထုညစ်ညမ်းမှုအမှုန်များထက် ၈ ဆနီးပါးသယ်ဆောင်နေပြီး Bond Street နှင့် Notting Hill Gate ကြားရှိလမ်းများသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
ကံကောင်းတာကငါတို့ဘုရင်အတွက်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဗဟိုလိုင်းကသိပ်အရေးမကြီးဘူး (မင်း Stratford မှာမနေဘူးလား၊
hun x ကိုအသက်ရှုပါ
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကန့်သတ်ချက်ထက် ၆ ဆမျှသာရှိသေးသောဗစ်တိုးရီးယားသည်အောက်စဖို့ဆပ်ကပ်နှင့်ဗစ်တိုးရီးယားအကြားအဆိုးရွားဆုံးသောwithရိယာနှင့်ဒုတိယမြောက်အထူထပ်ဆုံးပြွန်လိုင်းဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာမြောက် / တောင်ဝေးဝေးနေထိုင်သောမည်သည့်ဘုရင်၏ကျောင်းသားများအတွက်မြောက်ပိုင်းမျဉ်းသည် Strand နှင့် Guys သို့ရောက်ရှိရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
4. Bakerloo လိုင်း
Bakerloo သည်စတုတ္ထနေရာတွင်ရှိပြီး ၅.၄ ဆလောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသည်။ Elephant & Castle နှင့် Waterloo နှင့် Embankment တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Bakerloo မျဉ်းသည်ထိုတွင်နေထိုင်သူများအတွက်ရှောင်လွှဲမရနိုင်ပါ။
Jubilee သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်လိုင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်းလေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့်အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး ၅ ခုထက် ပို၍ လုံခြုံသောကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ Waterloo ကို London Bridge နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည် Jubilee လိုင်းသည်ကျောင်းဝင်းများအကြားခရီးသွားသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
၆။ Piccadilly မျဉ်းကြောင်း
Piccadilly သည် WHO ၏အန္တရာယ်ကင်းဆုံးကန့်သတ်ချက် (Holborn နှင့် Russell Square) အကြားနက်ရှိုင်းသောနေရာတွင်တည်ရှိနေသော်လည်းနက်ရှိုင်းသောပြွန်လိုင်းများအားလုံး၏အနည်းဆုံးသောညစ်ညမ်းသည်။
ခရိုင်သည်နံပါတ် (၇) တွင်စာရင်းတွင်ပါရှိသည့် 'မျက်နှာပြင်ခွဲ' ပြွန်၏ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ 2x အောက်တွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောကန့်သတ်ချက်တွင်နက်ရှိုင်းသောလိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့်အတန်းပိုကောင်းပေမယ့်သူတို့နေဆဲမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
တနည်းကား၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောကန့်သတ်ချက် 2x အောက်တွင် Metropolitan line သည်အများစုထက်များစွာသာလွန်သည်။ သို့သော် KCLers အများစုအတွက်တော်တော်အသုံးမကျသည်။
စက်ဝိုင်းသည်ကန့်သတ်ချက် ၁.၅x ကျော်သာရှိပြီးလေထုညစ်ညမ်းမှုမှာ ၄ င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သောခရိုင်လိုင်းထက်နည်းသည်။ Circle နှင့် District သည် Embankment နှင့် Temple နှစ်မျိုးလုံး၏နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်ပြီးအရှေ့ (သို့) အနောက်ပိုင်းမှထွက်ခွာသွားသော Strandies များအတွက်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။
10. Hammersmith & City လိုင်း
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးညစ်ညမ်းသောပြွန်လိုင်းဖြစ်သော Hammersmith & City သို့ရောက်ရှိသည်။ ၁.၅ ဆကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိလျှင်၎င်းသည်ပြွန်လိုင်းအားလုံး၏အသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်သည် ကံမကောင်းစွာပဲငါတို့အတွက်ဒါဟာ King ရဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အနည်းဆုံးအသုံးဝင်သည်။
TFL သည်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုတုန့်ပြန်သည်မှာ Tube သည်လေထုအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြေအောက်ရေအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုဘယ်တော့မျှထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊
• 'ငါတို့အရေးယူလို့မရဘူးဒါပေမယ့် uni လုပ်နိုင်တယ်' - KissCL သည် Maughan 'creepy ကောင်လေး' အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
•အဲဒီမှာ King ရဲ့မှာပူးပေါင်းကြံစည်မှု Society ကဖွင့်နှင့်၎င်းတို့၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုထိတ်လန့်ဖြစ်ကြသည်